Ukuhlaziywa Kwansuku Zonke Kwezobuchwepheshe - EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY Namuhla Ukuhlaziywa Kwe-Forex
UKUKHUTHAZA UKUXHUMANA KWEZIMVUMO: Okuqukethwe kwalokhu kubalulekile ukuxhumana kokukhangisa, hhayi ucwaningo oluzimele lokutshala izimali. Ngakho-ke, izimfuneko zomthetho nezokulawula mayelana nokucwaninga okuzimele kokutshalwa kwezimali akusebenzi kulokhu okushiwo futhi akuhambisani nanoma yikuphi ukuvinjelwa kokubhekana nokusabalalisa kwawo.
Lezi zinto zenzelwe ulwazi olujwayelekile kuphela (noma ngabe liveza noma yikuphi imibono noma cha). Akuzicabangeli izimo zakho noma izinhloso zakho. Akukho okukulesi sici (noma kufanele kubhekwe ukuthi kube) ngokomthetho, ezezimali, utshalomali noma ezinye izeluleko lapho kufanele kube khona ukuthembela. Ayikho imibono enikezwe kulesi sihloko isincoma yi-FXCC noma umbhali wokuthi noma yikuphi ukutshalwa kwezimali, ukuphepha, ukuthengiselana noma isu lokutshala izimali kufanelekile kunoma yimuphi umuntu othize.
Nakuba ulwazi olunikezwe kulokhu kukhulumisana lokukhangisa lutholakala emithonjeni ethathwa njengokwethenjelwa, i-FXCC ayinikezi isiqinisekiso sokuthi kunemba noma ukuphelela kwayo. Lonke ulwazi lubonisa futhi lungashintsha ngaphandle kwesaziso futhi lungase lungabi khona isikhathi noma nini. Ngeke kube yi-FXCC, noma umbhali walokhu okubonakalayo oyoba nomthwalo wokulahlekelwa noma yikuphi ukulahlekelwa okungase kube khona, ngokuqondile noma ngokungaqondile, okuvela kunoma yikuphi ukutshalwa kwezimali okusekelwe kunoma yiluphi ulwazi oluqukethwe lapha.
Lezi zinto zingase zihlanganise amashadi abonisa izinsimbi zemali 'ukusebenza kwangaphambilini kanye nezilinganiso nezibikezelo. Noma yiluphi ulwazi oluphathelene nokusebenza kwangaphambilini kokutshalwa kwezimali akuqinisekisi ukuthi ukusebenza kwesikhathi esizayo.
Ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela, amanani asetshenziswe kulezi zibonelo amanani ka-FXCC, hhayi amalabo abesithathu.
Vula i-akhawunti ye-ECN yamahhala namhlanje!
Izwe Afghanistan Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia, State Plurinational of Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Cocos (Keeling) Islands Colombia Comoros Congo Congo, Democratic Republic of the Cook Islands Costa Rica I-Cote d'Ivoire C te d'Ivoire Croatia Cuba Cyprus I-Czech Republic Denmark Djibouti Dominica i-Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Islands (Malvinas) Faroe Islands Fiji Finland France French Guiana French Polynesia French Southern Territories Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Holy See (Vatican City State) Honduras i-Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran, Islamic Republic of Iraq Ireland Isle of Man Israel Italy Jamaica Japan Jersey Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea, Democratic Republic of Yabantu Korea, Republic of Kuwait Kyrgyzstan Lao People Democratic Republic Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libyan Arab Jamahiriya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Macedonia, yangaphambili zaseYugoslavia Republic Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia: isexwayiso Moldova, Republic of Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands Netherlands Antilles New Caledonia E-New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Norway Oman Pakistan Palau Territory yasePalestina, Ematasa Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn Poland Portugal E-Puerto Rico Qatar Ukuhlangana kabusha kwe-R union Romania Inhlangano yase Russia Rwanda I-Saint Barth lemy Saint Helena, Ascension futhi Tristan da Cunha Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Martin (French ingxenye) Saint Pierre and Miquelon Saint Vincent and the Grenadines Samoa San Marino São Tomé and Príncipe I-Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia Iningizimu Afrika South Georgia ne-South Sandwich Islands Spain i-Sri Lanka Sudan Suriname Svalbard and Jan Mayen Swaziland Sweden Switzerland Sy Taiwan, eSifundazweni China Tajikistan Tanzania, United Republic of Thailand Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinidad and Tobago Tunisia igalikuni Turkmenistan Turks and Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine I-United Arab Emirates i-United Kingdom Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela, Bolivarian Republic of Viet Nam Virgin Islands, British Virgin Islands, US Wallis and Futuna Western Sahara Yemen Zambia Zimbabwe
Ukuhweba nge-Forex kuyingozi.
Ungase ulahlekelwe yinzuzo yakho yonke.